Ukwenza imali aicihandwa sakho sikuzwakala kanjani? Kuhle kahle kakhulu?
Kubantu abaningi, yilokho umsebenzi we-YouTuber obonakala uhlanganisa. Vele uhlale phansi phambi kwekhamera futhi wenze amavidiyo ngokudla ukudla, ukency amakhono wokuzilungiselela, noma udlala nje imidlalo yevidiyo futhi uzokwenza imali kuyo yonke imibono oyitholayo.
2.1 I-1- Ukency imali nge-YouTube /
Ngaphambi kokuba sifinyelele ekuthambekeni kwe-nitty kokency imali njenge-YouTuber, ake sibheke ezinye ze-YouTubers ezinkulu kunazo zonke futhi uhlole ukuthi zenzani okuningi.
Ucwaningo olwenziwa n Ama-Media Media Rockstars iveza ngokucacile ukuthi iziteshi ezinkulu ku-YouTube ziyithola kanjani futhi eziningi zazo zingathola inzuzo enkulu kumavidiyo nakubhalisile. Enye ye-YouTuber injalo PewDiePie (UFelik Kjellberg), oyala abangaphezu kwezigidi ze-500 esiteshini sakhe ngokubuka okungu-1.5 wezigidi ngevidiyo ngayinye.
Ukuba yisiteshi esisodwa esibhalisiwe ku-YouTube, i-PewDiePie ithola kalula imali engaphezu kwezigidi ezingu- $ 12 minyaka yonke kusukela kuyo yonke imizamo yakhe nangaphezulu. Esinye isiteshi, i-Rooster Teeth Company yokudlala nokuzijabulisa, ihola i- 13 milioane de dolari minyaka yonke, kuyilapho iziteshi ezincane njenge-Nigahiga ne-Epic Meal Time zithola i-2,9 $ yezigidi kanye ne-3,1 milioane USD ngokulandelana.
Ukulayisha kwakamuva kwePewDiePie – cishe ukubukwa kwezigidi ezingama-3 ezinsukwini ze-2 ngemuva kokuba le seeyo ikhishwe (ubone it bukhoma).
I-1- Ukency imali nge-YouTube /
Ake sithi utilizează usungulwe isiteshi futhi ulayishe amavidiyo ambalwa, ungaqala ngokushesha ukuthola i-YouTube ngokuvula i-YouTube unike amandla ukency imali pentru akhawunti yakho bese ubhalisela Google AdSense.
Okokugcina, kuzodingeka ufake isicelo se-a Uhlelo lokubambisana lwe-YouTube Uhlelo oluzokunika izinzuzo ezimbalwa ku-akhawunti yakho, njengamathuluzi wokuhlaziya, amathuluzi okuhlela athuthukile, nokuk/2016 Ukuze ube nguzakwethu we-YouTube, kuzodingeka ube nokubuka komphakathi kwe-10.000 esiteshini sakho (isib. Ukubukwa kwe-1.000 kumamavidiyo we-10) futhi kubuyekezwe yi-YouTube ukuba abe nguzakwethu we-YouTube oqinisekisiwe.
Uma uqala ukwenza imali ngamavidiyo akho, ungakhetha ukuthi ufuna ukuthi izikhangiso zivele kumavidiyo akho nokuthi imali engakanani ozothola iyoxhomeka ekutheni izethameli zakho zithinta kanjani. Nakuba kuyindlela ecacile kakhulu yokuthola imali ku-YouTube, futhi kuyinkimbinkimbi kakhulu ngenxa yokuthi i-YouTube iyayibala.
I-YouTube ibonisa ukubonakala (uma umbukeli echofoza noma ebukela izikhangiso zakho) nakuwo wonke umbono we-1,000, uzothola cishe i- $ 7.50. Inkinga indlela ukucabanga ngayo kubalwa ngayo, njengoba kuncike kakhulu ekusebenziseni izethameli zakho. Uma umbukeli enquma ukweqa ngezikhangiso noma ukusebenzisa i-ad-block, ngeke ukwazi ukukhokhelwa umbono. Ngenxa yalokho, ukubukwa okuphezulu akusho ukuthi kuhumushe ividiyo ezuza kahle. Ividiyo enezibuko ze-10.000 ingahle ibe nokubonakala kwe-3.000 ayizinkulungwane, okusho ukuthi ihumushe kuphela ku- $ 22.50 kuphela.
Ukuze ukwandise inzuzo yakho kwividiyo enezikhangisi, kuzodingeka wazi ukuthi iziphi izikhangiso ezisebenza kahle kunani okuqukethwe. Uma kungumzuzu omfushane we-3 ividiyo, isikhangiso se-pop-up singase sibe ngcono kunesiqeshana sesibili se-30. Ukusebenzisa uhlelo lozakwethu be-YouTube, kufanele ube nokufinyelela ku ikhasi le-analytics ku-YouTube ukunquma ukuthi yini ephumelela kakhulu kulabo abalaleli bakho.
Naphezu kokuthi kulula ukusetha, ukuzuza imali ngqo kusuka ku-YouTube akuvami ngokwabo, ukuthi kungani u-YouTubers amaningi enithola ezinye izindlela zokuthola.
Njengoba kumile manje, ukuzuza kuphela ku-YouTube kuthola kanzima kakhulu futhi ngenxa yaleso sizathu, akuyona în engavamile ukubona i-YouTuber iya ngaphesheya kwe-YouTube ukency imali yabo. Njengamanje, lezi zindlela ezintathu ezinkulu ziyi: ukuxhaswa nokufakwa kwemikhiqizo, ukuthengisa izinto zokuthengisa, nokuthengwa kwabantu.
Enye yezinhlinzeko eziningi zokuxhaswa kwe-YouTube ezitholakalayo I-FameBit, indawo femeethe yabadali ukuze bathole amathuba okuxhasa futhi bathole imali ekudaleni nasekusabalaleni okuqukethwe.
Uma uhlobo lokuqukethwe ofuna ukukency kuyi-off-offs (isib. Isici sefilimu noma i-albhamu yomculo), i-Kickstarter ngokuvamile iyindawo engcono kakhulu yokuqala.
Ku-Kickstarter, utilizează ikhasi leprojekthi ngenani lemali oyidingayo ukuqedela iphrojekthi yakho. Abantu base bethemba kuso futhi uma ulawula ukufinyelela imigomo yakho esikhathini esinqunyiwe, uzothola izimali. Imiklamo ye-kickstarter iningi kakhulu emvelweni ngamanye amaphrojekthi afinyelela kwizigidi zamaRandi ngemali.
Eziningana eziphawulekayo njenge- I-Kung Fury ikwazi ukuqoqa imali engu- 600.000 $ yezimali kusuka ezifungo zayo.
Ngesikhathi i-Kickstarter ithatha isamba esikhulu se finanțează proiectarea, uPrereon isetshenziselwa kakhulu ukulinganisa okuncane kodwa izinto eziqhubekayo zokuqukethwe.
Kungenzeka ukuthi uthole ukuthi u-YouTubers ubiza i-Patreon ekhaya ngoba inganikeza umthombo ongenamathele weholo uma kuqhathaniswa ne-Kickstarter. Ngokufanayo ne-Kickstarter, usungule ikhasi elinemigomo yokuxhaswa ku-Patreon, umehluko wukuthi umgomo wenkxaso yenyanga njalo kunomuntu owodwa. I-YouTubers nabadali bokuqukethwe njengawe Jim Sterling futhi I-Red Letter Media ziyizibonelo ezinhle zamakhasi we-Patreon aphumelelayo ngemali engaphezulu kwe $ 12,000 ne- $ 19,000 $ ngokulandelanayo, nyangazonke.
UJim Streling va fi de 12.000 USD + njalo ngenyanga ngenxa yakhe Isiteshi se-YouTube.
Ngamanje, kufanele ube nombono wokuthi u-YouTuber ophumelelayo wenza kanjani nokuthi bahamba kanjani ngokukwenza. Iningi lama-YouTubers amakhulu laqala ukency okuqukethwe ezinhlokweni nasezindaweni abazithandayo futhi gagica nesifiso sokuqhubeka nokwenza lokho okuqukethwe.
Kulula ukucabanga ukuthi njenge-YouTubers, konke okumele ukwenze kungukuzijabulisa ngekhamera. Kodwa iqiniso le ndaba, ukuthi u-YouTuber kusho ukusebenza ngaphandle kwekhamera ukuhlela futhi cwaninga okuqukethwe kwakho, ukuthola izindlela zokwenza imali ngokuphumelelayo, futhi uqiniseke ukuthi unayo imali eyanu ekuk.
Kuyo yonke indaba ye-PewDiePie impumelelo, kunamanye amanye ama-YouTubers abesazama ukukency ku-YouTube futhi asinda. Yingakho abadali bokuqukethwe banqume ukungathembeki kuphela ku-YouTube njenge-platforma yabo yokusatshalaliswa.
I-Twitch iyisibonelo esihle sesikhulumi esikuvumela ukuba usakaze okuqukethwe kwakho ezithameli ngenkathi uthola amathiphu neminikelo evela kubabukeli. Ukusebenzisa i-YouTube ekushintsheni komsebenzi ohlukile kuyisitayela esidumile esinamaningi we-YouTubers enza ama-film, ithelevishini, nokusakaza.
Ku-201, uJimmy Tatro waqala "I-TheJimmyTatroChannel," eyashintshwa kamuva yaba "LifeAccordingToJimmy. "I-Tatro ibonakala ibhekene nesichungechunge se-Netflix" i-american Vandal. "; kanye nama-film "22 Jump Street" Nu- "Adulti 2".
Ukwenza imali enkulu ngaphandle kokuthi ube yi-YouTuber kungase kuzwakale kungenangqondo, futhi, kodwa ekugcineni, yini ephoqelela ama-YouTubers amaningi ukuqhubeka noapte influență okuqukethwe akuyona imali. Kuyinto injabulo yokwenza okuqukethwe kwabanye.
Ukuba nguwe WeTuber kusho ukuthi awuhlali njalo ufuna ukubheka ividiyo ngokubukwa kwezigidi futhi uthole izinombolo ezinkulu zokubhaliselwe. Ukuba i-YouTuber ngokuphathelene nokusakaza ukuthanda kwakho nokudala nokukency kube okuqukethwe abantu abakuthandayo.